FALANQEYN+DAAWO: Maxaa ka dhalanaya fashilka wada hadalada DFS & Puntland?
MUQDISHO(P-TIMES) – Wada hadalo gaar ah oo ay yeesheen Puntland iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa xalay ku fashilmay Boosaaso, ka dib markii ay labada dhinacba isku mari waayeen arrimaha ku saabsan in Madaxweyne Deni uusan aadin magaalada Kismaayo iyo In kale, oo ay Xukuumaddu doonayso in uusan gaarin magaaladaas.
Caqabado badan ayaa ka dhalan kara arrimaha cusub ee labada dhinac, waxaana Puntland oo ahayd cidii asaastay dawladda Faderaalka Soomaaliya ay hadda u muuqataa mid aan waxba kala socon howlaha hoose ee dawladda faderaalka, sidaas oo kalena uusan xariirba kala dhaxeynin.
Wasiiradda Puntland kasoo jeeda ee howshan wada hadalsiinta u tagay Boosaaso ayaa niyadjab kala laabtay Puntland, taasina waa caqabad kale oo iyaga laftirkooda ku timi, maadaama aysan saameyn ku laheyn arrimaha deegaanadooda.
Puntland, waxay dagaal kala kulmaysaa dhinaca Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya, tan iyo inta uu socdo khilaafka labada dhinac, lamana filayo in la gaaro heshiis caloolfiyoobo ku jirto tan iyo doorashada 2021-ka lagu kala adkaanayo.
Ilaa December sannadkan haddii lagu gaaro sida la yahay dad badan ayaa rumeysan in ay dhici karaan isbedelo waa weyn oo ka yimaada xagga Beesha Caalamka, waxaana adag in la fahmo waqtigan kutalogalka Madaxda dawladda Faderaalka.
Madaxweynaha Puntland caqabado cusub ayaa ka qabsan doona dhinacaha gudaha ee deegaanadiisa, oo ay qaarkood taageero u muujinayaan dawladda Faderaalka, Villa Soomaaliya ayaa cabsi laga qabi karaa in ay Malaayiin Dollar u adeegsato sidii culeysyo loogu abuuri lahaa Puntland.
Tan iyo assakii puntland ee 1998 waxaa isdajoogey caqabado iyo weeraro lagu hayey puntland taaso salka ku hayey walina ku haya ISIR NACAYB. Waana xaqiiqo cidi’na inkiri karin oo diidi karin.
Waa mahad Alle in shicibka iyo xukumadihii isdabajoogey ee puntland ay u dhabar adeegeen oo iska difaaceen duulaamadaas.
Suashu waxay tahay ” is-difaacaanu iyo dhabar adaygaanu intee muda ah ayuu socon karaa”. Somalidaa ku maahmaah’da
” biyo kaa badan iyo dad kaa badan’ba wey ku harqiyaan”
Ma waxaa lasugayaa markii daad naqaado. Caqli saliim ah haduu jiro waa MAYA.
Sabataas ayey u tahay muqadas in aad ku biidhid XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND si aad u badbaadisid mustaqbalka ubad’kaaga iyo kay sii dhalan. U hiili farcanka reer puntland ee soo socda oo dal iyo dagaan ay dhaxlaan maanta u difaac. Ku biir XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND